Nke a bụ igwe ojii oké ifufe na-eme ka ndị Argentina na ụwa nwee ịhụnanya | Netwọk Mgbasa Ozi
Nke a bụ igwe ojii oke mmiri ozuzo na-eme ka ndị Argentina na ụwa nwee ịhụnanya
Foto - Agustín Martínez
Mara mma, nri? Igwe mmiri ozuzo dị egwu. Ha nwere ike itule ihe dịka 20km n'ịdị elu, ya mere adịkarịghị enwe ike ịhụ ha n'ebube ha niile site n’ala ebe a, si n’ala. Mana nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ha mere na Province nke Neuquén, na Argentina, na Nọvemba 30.
N'ebe ahụ, e guzobere Cumulonimbus dị egwu, nke bụ ígwé ojii nke na-enye oké mmiri ozuzo na mmiri ozuzo, na-eje ozi dị ka mmụọ nsọ maka ndị ọkachamara na ndị na-ese foto.
Dị ka ọ na-adị, mgbe Cumulonimbus na-etolite na mpaghara ọ na-abụkarị akụkọ ọjọọ, ebe ọ bụ na ebe ahụ mmiri ozuzo na-ewetakarị ọtụtụ nsogbu, dịka n'okporo ámá idei mmiri, mwepụ, ma ọ bụ mbuze; Otú ọ dị, Wednesdaybọchị Wenezdee gara aga ndị Neuquén lere anya na mbara igwe, na-eju anya site na mma nke igwe ojii ahụ dị egwu.
Ha sere ya na ọkwa ya dị iche iche, na gburugburu ebe dị iche iche: site na ụlọ, site na Río Negro ... pịa ebe a.
Kedu ka esi emepụta Cumulonimbus?
Cumulonimbus bụ ígwé ojii nke oké vetikal mmepe, nke mebere site na kọlụm nke ikuku na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ nke na-ebili na ntụgharị gburugburu. Ndabere ya erughị 2km elu, mana elu ya ruru 15-20km. Ha na-ewepụtakarị mmiri ozuzo na égbè eluigwe, karịsịa mgbe ha mepụtara, nke bụ mgbe ha ji azụ azụ na azụ azụ. Ọ nwere ike na-etolite na iche ma ọ bụ na otu, ma ọ bụ tinyere a oyi ihu.
Dabere n’ebe ha bidoro na ike mmiri ozuzo ha nwere, ha nwere ike ịkpata ọtụtụ nsogbu. Ọmụmaatụ, Ọ bụrụ na mmiri zoo kpamkpam n’ebe mmadụ bi, ọ ga-ebute idei mmiri na / ma ọ bụ mbuze. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ọnọdụ ndị dị mma ezute, ha nwere ike ịkpata akụ mmiri igwe na oke mmiri.
Kedu ihe ị chere banyere foto nke Argentina Cumulonimbus? 🙂
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » Nke a bụ igwe ojii oke mmiri ozuzo na-eme ka ndị Argentina na ụwa nwee ịhụnanya
Nnụnụ mmiri na-enyere aka iwelata okpomọkụ Arctic
Ọnọdụ okpomọkụ zuru ụwa ọnụ arịgoro ogo 1,31